Ukuphupha uCalla Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
UCalla, obizwa ngokuba yi-calla, sisityalo esingaqhelekanga. Yinzalelwane yelizwekazi leAfrika, iyabuthanda ubushushu kwaye akululanga ukukhula. Iintyatyambo zazo zinobuhle obukhulu kunye nobabalo, siyazazi ngokwendalo ngeentyatyambo ezimhlophe, kodwa i-calla lily inokuba pinki, orenji okanye tyheli.
Into ekhethekileyo malunga neentyatyambo zayo: i-calla ayenzi iipalali, kodwa ine-bract enye, enombala wokuhombisa kwaye ijikeleze intloko yeentyatyambo ngomungu kunye ne-ovary. Yeyosapho lwe-arum kwaye ubukhulu becala inetyhefu. Nokuba sisityalo okanye intyatyambo esikwe kwivazi, uCalla uzisa ubuhle kunye nobuhle kumagumbi ethu.
Kodwa izisa ntoni kumaphupha ethu? Kuthetha ukuthini xa sibona okanye sikhetha i-Cove ephupheni?
1 Uphawu lwephupha «uCalla» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «uCalla» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uCalla» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uCalla» - ukutolikwa ngokubanzi
Iintyatyambo zephupha zihlala zitolikwa ngendlela elungileyo. I-cove ifanekisela ubuhle ngomntu ngamnye. Iphupha lingabonisa ukuba umphuphi uziva ubomi bakhe buhle, okanye yena okanye abanye abantu, kuxhomekeke kwimeko apho i-cove ibonakala khona ephupheni. Ukubakhathalela okanye ukubatshintshela kwenye kungathetha inyani yokuba ukuphupha kwi Umsebenzi wobudlelwane kufuneka okanye ufune. Ukuba, ngokuchaseneyo, unyathela iintyatyambo okanye uzaphule, akabuxabisi ubuhle bazo.
I-Cove ephupheni, ngakumbi xa imhlophe, ikwathetha ubumsulwa kwaye ifuzisela oko INgqobhoko. Unokuthi njengophawu lokuphupha ukuba ukuphupha kumalunga necala lakho lokomoya. Mhlawumbi ujonge umyalezo wosindiso kuwe okanye ifilosofi onokuthi uyisebenzise njengesikhokelo kubomi bakho bemihla ngemihla. Ukubona umntu ephupheni eneentyatyambo ze-calla ezingalweni zakhe kubonisa ukuba iphupha lijonga lo mntu umsulwa.
Rhoxisa iiGannet ezibunileyo Usizi okanye ukubuna kobuhle.
Uphawu lwephupha «uCalla» - ukutolikwa kwengqondo
Kutoliko lwengqondo ngokwengqondo, iphupha lisetyenziswa njengophawu lwephupha isini iqwalaselwe. Kwindoda ephuphayo, ibonakalisa umfazi othandekayo okanye owoyikayo obonakala emhle kakhulu, emhle kakhulu kwaye emsulwa, kodwa mhlawumbi engenakufikeleleka. Kubafazi, i-cove ibonisa ubufazi babo. I-Cove inesidima kwaye inesidima kwaye ibhekisa ngakumbi kuthando kunye nokusondelelana kunakwimpembelelo zasendle.
Ukongeza, olu phawu lwephupha lunokubonisa umntu ophuphayo ubudlelwane bakhe kunye nobuhle. Uhlangabezana njani nentyatyambo ephupheni? Ngaba umkhathalele okanye uyamkhathaza? Usenokungakwazi ukubona ubuhle bakho okanye ufune okungakumbi ebomini bakho. Ngamanye amaxesha, ii-coves zisenokuba ngaphakathi kucoca Jonga, iphupha lithetha ukuba ukuphupha kufuna ukuzihlambulula kwinto ethile.
Uphawu lwephupha «uCalla» - ukutolika kokomoya
Ngengqiqo yokomoya, i-cove ibizwa ngokuba ngumqondiso wephupha. ubunyulu kwaye kuloo nto Umgaqo wobufazi.